Voankazo: be mpitady eo amin’ny tsena iraisam-pirenena ny akondro | NewsMada
Voankazo: be mpitady eo amin’ny tsena iraisam-pirenena ny akondro
110 tapitrisa t isan-taona ny vokatra akondro maneran-tany, manambara fa io ny voankazo be mpanjifa indrindra. Inde, Chine, Philippines, firenena telo voalohany mpamokatra be indrindra. Tompon’ny tsena ivelany kosa ny any Amerika atsimo.
Voankazo mora simba ny akondro, ka mila fitandremana sy manaraka fepetra maro ny fivarotana azy, na ho an’ny tsena anatiny na ho an’ny tsena ivelany. Ny tena tompon’ny tsena ivelany eo amin’ny akondro hatramin’izao, ry zareo firenena mpamokatra any Amerika atsimo, manondrana hatramin’ny 81 %. Malalaka rahateo ny tsena, araka ny namaritan’ny Fikambanana iraisam-pienena momba ny varotra (OMC). Eo amin’ny tsena iraisam-pirenena, ny Vondrona eoropeanina no mpanafatra voalohany, 6,5 tapitrisa t isan-taona na 30 % (Alemaina mividy 1,2 tapitrisa t) ; Etazonia, manafatra 4 tapirrisa t na 27 % ; ary samy manafatra 1 tapitrisa t avy i Japana, i Rosia, izay hita mihamitombo isan-taona.
Orinasa iraisam-pirenena dimy lehibe (Chiquita, Dole, Del Monte, Noboa, sy Fyffes) no mitrandraka ny tsena iraisam-pirenena. Eo am-pelatanan’ireo orinasa ireo ny 40 hatramin’ny 100 % amin’ireo vokatra avy any Amerika atsimo. Efa mitambatra izao ny orinasa amerikanina Chiquita sy irlandey Fyffes, ka ny fitambaran’izy ireo, mahita 4,6 miliara dolara, ankoatra ireo orinasa hafa amin’ity sehatra ity. Midika izany fa volabe ny mihodina avy amin’ny akondro.
Very lavitra i Afrika na betsaka ihany aza ireo malaza mpamokatra ity voankazo ity, i Cameroun, i Ghana, i Côte d’Ivoire izay nandray fivorian’ireo tany mpamokatra any Afrika andrefana, tamin’ny volana septambra 2019. Entanina hatrany ny famokarana akondro, be mpitady eo amin’ny tsena iraisam-pirenena. Ny Vondrona eoropeanina no mpanjifa akondro betsaka avy aty Afrika, saingy kely manodidina ny 600 000 t fotsiny.
Tsy manondrana akondro intsony i Madagasikara
Momba an’i Madagasikara manokana, tany amin’ny taona 60 sy 70 no nalaza tamin’ny fanondranana akondro, ny taona 1975, ohatra, nahatratra 400 000 t ny vokatra avy eto amintsika. Nanomboka ny taona 80 ka hatramin’izao, mihena hatrany ny vokatra, mijanona ho an’ny tsena eto an-toerana ihany. Nanomboka tamin’ny repoblika faharoa izany ka hatramin’izao, tsy misy mihitsy politika fampitomboana sy fanatsarana ny vokatra akondro avy amin’ny minisiteran’ny Fambolena misahana izany.